MW: Farmaajo & RW: Kheyre oo isku afgartay in aan waxba laga beddelin wasiirrada cusub | Kobciye24.com
MW: Farmaajo & RW: Kheyre oo isku afgartay in aan waxba laga beddelin wasiirrada cusub
Mar 27, 2017 - jawaab
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa xalay Xarunta Madaxtooyada kula kulmay inta badan Golaha Wasiirada ee magacaaban.
105 Xildhibaan, ayaa Guddoonka Baarlamaanka u gudbiyay in Ra’iisal Wasaaraha Somaliya uu dib ugu noqdo magacaabista Golaha Wasiirada, iyagoo ku andacoonaya inaanan magacaabistooda lagu salayn nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5.
Xildhibaanadan, ayaa waxay sheegeen in sad-bursi loo sameeyay beelaha qaar, halka kuwo kalana la qadiyay, sidaasi daraadeedna ay dalbanayan ka hor inta aan Baarlamaanka la horkeenin in dib loogu laabto Golaha Wasiirada.
Kulankan oo sida la sheegay looga yeeray Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu ka cudurdaartay, balse waxaa bedelkiisa goobjoog ka ahaa Gudoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi C/laahi.
Wada hadal iyo fallanqayn dheer ka dib, ayaa waxay dhinacyadan isu waafaqayn inaanan waxba laga bedelin Golaha Wasiirada, ha yeeshee Wasiir kasta laga doonayo in uu raadiyo kalsoonida Xildhibaanada diidan.
Tani, ayaa waxaa loo fasirtay in Farmaajo iyo Khayre ay garowsadeen inaanan la dhayalsan karin hujuumka ka soo fuulay Xildhibaanada, isla-markaana ay xasaradan siyaasadeed si buuxdo u soo geliyen Golaha Wasiirada ee magacaaban, xilli 43 ka mida Wasiirada ay yihiin Xildhibaano.
Xildhibaan Idiris Cabdi Takhtar oo ka mid ah Xildhibaanada ka biyo diidan Golaha Wasiirada cusub, ayaa sheegay in ay soo badanayan Xildhibaanada saluugsan Wasiirada magacaaban.
31-ka bishan, ayaa Ra’iisal Wasaare Khayre loo qabtay in kama dambeys uu Golihiisa Wasiirada ku horkeeno Xildhibaanada Baarlamaanka.